Filohan’ny CCO : « Ho mafy ny ady… »: efa etsy Ankadifotsy sy Alasora ary Ampitatafika ny coronavirus | NewsMada
Manomboka mampiahiahy. Nanambara ny minisitry ny Atitany sady filohan’ny Foibe fibaikoana ny ady amin’ny covid-19 (CCO) fa ho sarotra ny hiatrehana ny coronavirus. Mitombo hatrany ny isan’ireo tratran’ny valanaretina amin’ny alalan’ny fifampikasohana.
Toerana hafa ankoatra ny etsy Tetezan’i Bekiraro Isotry. Nahitana olona voan’ny coronavirus koa izany etsy Ankadifotsy sy Ampitatafika ary Alasora. Niampy olona vaovao miisa10 indray ireo tratran’ny coronavirus taorian’ny fitiliana avy eny amin’ny Institut Pasteur (IPM). Tafakatra 82 izany izao ireo tratran’ny coronavirus eto amintsika, araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny CCO eny Ivato, ny Pr Vololontiana Hanta, omaly. Notsindriny fa tsy ahitana soritr’aretina izy ireo. Na izany aza, sempotra ny iray mitondra ny covid-19. « Telo ireo mitondra ny coronavirus avy amin’ny sidina avy any Frantsa sy ny Nosy Maorisy. Fito kosa ireo mitondra covid-19 ka ny dimy amin’izy ireo vokatry ny fifaneraserana sy fifampikasohana teto an-toerana. Ny roa tsy mbola fantatra ny nahazoany ny tsimok’aretina », hoy izy. Nanteriny fa avy eto Antananarivo ny efatra voa tamin’ny fifampikasohana. Roa avy any Toliary ary iray avy any Nosy Be. « Midika izany fa tokony hitandrina sy hanamafy ny fepetra. Efa miparitaka eny amin’ny fiaraha-monina sy ny fokontany izany izao ny valanaretina », hoy ihany ny mpitondra tenin’ny CCO.
Kivy tanteraka ny filohan’ny CCO sady minisitry ny Atitany
Manoloana izany, kivy tanteraka ny minisitry ny Atitany sady filohan’ny CCO amin’ny fahamaroan’ny olona mbola mivezivezy sy niha maro indray aza, omaly. « Tena anaty ady mafy mihitsy isika. Manahirana satria tsy fantatra intsony hoe iza no voa. Teo aloha, mbola fantatra hoe tratran’ny coronavirus ireo mpandeha avy any ivelany. Izao tsy fantatra intsony na ireo mifanena eny an-dalana aza amin’ny fitondrana ny tsimok’aretina », hoy ny minisitra. Nohitsiny fa tsy misy antony mazava rehefa anontaniana ireny olona mandeha sy mivezivezy ireny. « Manerana ny Nosy mihitsy ny hamehana ara-pahasalamana ary tsy nataotao foana izany. Zava-doza izany ary ho sasam-poana ny asan’ny ataon’ny mpitondra sy mpiasan’ny fahasalamana raha tsy manome tanana, tsy mivoaka ny trano isika satria efa loza miparitaka izy io », hoy ihany ny minisitra.